News - ဈေးပေါသောအိမ်ထောင်စုစီးပွားရေး - အရည်ဖြည့်စက်
အစားအစာ၊ နေ့စဉ်ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများထုပ်ပိုးသည့်စက်များတွင်စက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ စျေးကွက်အပြောင်းအလဲနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတိုးတက်မှုတို့ကြောင့်ဖြည့်စွက်သည့်စက်ပစ္စည်းများတိုးတက်မှုသည်အမျိုးမျိုးသောခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပြသခဲ့သည်။ စက်ပစ္စည်းဖြည့်ခြင်းသည်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ ခေတ်မီစျေးကွက်ဝယ်လိုအားမှာဆက်လက်ကျယ်ပြန့်နေပြီးကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအတွက်စားသုံးသူများ၏လိုအပ်ချက်မှာလည်းမြင့်တက်နေသည်။ အနာဂတျမှာ, အဖျော်ယမကာစက်ယန္တရား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမြန်လမ်းသွားသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
စက်ကိုဖြည့်သည့်အရာသည်အရာဝတ္ထုများကိုဖြည့်သောစက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာထုပ်ပိုးစက်တွေအတွက်ထုတ်ကုန်သေးငယ်တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်အတိုင်းအတာအရ semi-automatic အပြည့်စက်နှင့်အလိုအလျှောက်ဖြည့်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၏ရှုထောင့်ကနေ, က Semi- အလိုအလျောက်အဆာစက်များနှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်အဆာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်အရည်အအေးခံစက်၊ ငါးပိအဆာသုံးစက်၊ အမှုန့်အဆာစက်၊ စက်ပစ္စည်းပစ္စည်သည်လုပ်ငန်းများကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်လိုအပ်သောစက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းတွင်၎င်းတို့အများစုသည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အအေးခံစက်ကိုရွေးချယ်ကြလိမ့်မည်။
အဖျော်ယမကာဖြည့်သည့်စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ အီတလီနှင့်ယူကေနိုင်ငံတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအဆင့်သည်အတော်အတန်မြင့်မားသည်။ ဤပစ္စည်းကိရိယာများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းသစ်များကိုပြသသည်။ လည်ပတ်မှုမျိုးစုံ၊ တူညီသောပစ္စည်းကိရိယာများသည်လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီဖျော်ရည်၊ ပဲနို့အဖျော်ယမကာများနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့သောအဖျော်ယမကာအမျိုးမျိုးကိုအပူဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ ဖန်ပုလင်းရော Polyester ပုလင်းနှစ်ခုလုံးပြည့်နိုင်သည်။ မြင့်မားသောမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသော output ကို။ ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာဖြည့်သည့်စက်၏အရှိန်သည် ၂ ဝဝဝပြည့်ပြည့်အောင်ဖြည့်သည်။ German H&K, SEN နှင့် KRONES တို့၏အဆို့ရှင်များသည် ၁၆၅၊ ၁၄၄ နှင့် ၁၇၈ အထိအသီးသီးရှိသည်။ ဦး ခေါင်း ကာဗွန်နိတ်မဟုတ်သောအဖျော်ယမကာဖြည့်သည့်စက်၏အဆို့ရှင်သည် ဦး ခေါင်း ၅၀ မှ ၁၀၀ အထိရှိပြီးဖြည့်သည့်နှုန်းသည်တစ်နာရီလျှင် ၁၅၀၀ ပြည့်သည်။ မြင့်မားသောနည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာ, မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရ, Self- ထိန်းချုပ်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်လိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မြင့်မားသောထိရောက်မှု။ On-line detection device နှင့် metering device သည်ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ၄ င်းသည်အမျိုးမျိုးသော parameters တွေကိုတိုင်းတာနိူင်တယ်။ စက်ယန္တရားများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ အလင်းနှင့်သံလိုက်ဓာတ်ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များပေါ်ထွက်လာသည်။
စျေးကွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူပြည်တွင်းအဖျော်ယမကာဖြည့်စက်များလည်းကြီးထွားလာသည်။ ပြည်တွင်းအဖျော်ယမကာဖြည့်စက်များထုတ်လုပ်သူများသည်မြန်၊ စွမ်းအင်နိမ့်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောထုပ်ပိုးခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုတီထွင်နေကြသည်။ အဖျော်ယမကာဖြည့်သည့်စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ပြီးသောကုမ္ပဏီများနောင်တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်များ (သို့) ထုပ်ပိုးသည့်စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ၏တိုးမြှင့်မှုအထူးသဖြင့်အစားအစာ၊ အဖျော်ယမကာနှင့်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းများတွင်တိုးပွားလာလိမ့်မည်။
အနာဂတျမှာ, အဖျော်ယမကာစက်ယန္တရား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အမြန်လမ်းသွားသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်။ လွတ်လပ်သောပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်များတည်ဆောက်ခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုမောင်းနှင်လိမ့်မည်။ လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကြောင့်မောင်းနှင်သောအရည်အသွေးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်စျေးကွက်တွင်သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်တန်ဖိုးမြင့်စျေးကွက်ရှိကိတ်မုန့်ကိုမျှဝေခြင်းသည်surelyကန်အမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အနာဂတ်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှုခင်းသည်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရည်အသွေးနှင့်လမ်းကြောင်းများဖြစ်နေ ဦး မည်။ အထူးသဖြင့်အနာဂတ်တွင်၊ စျေးကွက်အတွင်းယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုမဟုတ်တော့ပါ။ နိုင်ငံခြားအဖျော်ယမကာစက်ယန္တရားကြီးများသည်တရုတ်စျေးကွက်သို့တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သယ်ဆောင်လာကြပြီး၊
ကျေးဇူးပြု၍ capping machine သို့မဟုတ် labeling machine ပို၍ ကြည့်ပါ
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် BRENU သည်စက်ရုံငယ်များမှသည်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသို့ကြီးထွားလာသောဖောက်သည်အများအပြားနှင့်အတူလိုက်ပါခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ၊ ၎င်းတို့၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကိုတက်ကြွစွာစဉ်းစားသည်၊ ထို့နောက်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းရှိသူတို့၏ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်အကောင်းဆုံးစီမံကိန်းဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြသည်။ ဖောက်သည်များ၏ယုံကြည်မှုအစကြောင့် BRENU သည် capping တံဆိပ်ကပ်စက်ကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ယခု A မှ Z အားထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ဖောက်သည်များနှင့်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေးသွင်းသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့် BRENU သည်အထက်ပိုင်းနှင့်အနိမ့်ပိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးထုပ်ပိုးစက်နယ်ပယ်တွင်ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစည်းမှုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုပေးနိုင်သည်။
မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စက်များ၏အဓိကလက္ခဏာနှစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးလုပ်သားများသည်အကြီးအကျယ်ဖိအားပေးခံရသည်။ ၎င်းတို့သည် ၀ င်စက်စက်၏ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အတွက်တာ ၀ န်ယူရန်လိုအပ်ရုံသာမကထုပ်ပိုးသည့်စက်ယန္တရားတွင်ပေါ်လာနိုင်သည့်နည်းပညာအသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုများကိုအမြဲဂရုပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့အသစ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအချို့ကိုဖြစ်ကြသည်။
၁။ ပေးပို့ချိန်သည်တိုတောင်းပါသည် စီးပွားရေးပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ထုပ်ပိုးလုပ်သားများသည်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းများ၊ သူတို့ကကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများအားဖြည့်ရန်လိုအပ်ပြီးထုတ်လုပ်မှုအချိန်တိုအတွင်းအပြည့်အဝထုတ်လုပ်နိုင်မည်။ ဘတ်ဂျက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုသည်၊ သို့သော်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး၊ အထူးသဖြင့်စားသောက်ကုန်နှင့်အဖျော်ယမကာလုပ်ငန်းများတွင် ၀ ယ်လိုအားစဉ်ဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာမှုက၎င်းတို့သည်လက်ရှိပြင်းထန်သောစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အလွန်တင်းကျပ်သောသတ်မှတ်ထားသောဖြေရှင်းချက်များအတွင်း၌မြင့်မားစွာပေါင်းစည်းထားသောအဖြေများရရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်သည်။
2. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အလိုက်အထိုက်နေတတ်။ ထုပ်ပိုးစက်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကြောင့်ယင်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးတက်စေရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် ဦး ထုပ်များ၊ စတစ်ကာများ၊ လက်အိတ်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကိုင်ရန်ပိုမိုကွဲပြားသောကွန်တိန်နာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်း ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ထုပ်ပိုးစက်သည်အရွယ်အစား / ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောကွန်တိန်နာများကိုအပိုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများမလိုဘဲ၊
3, အစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်း။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းစာရင်းယူနစ်များထပ်တိုးတန်ဖိုးနှင့်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားရန်လက်လီရောင်းချသူများ၏အမိန့်သည်လူများကိုထုပ်ပိုးစက်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ စျေးကွက် ၀ ယ်လိုအားကနည်းပညာတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်သည့်အခါဆလင်ဒါသန့်ရှင်းပြီးအဆို့ရှင်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ပစ္စတင်ကိုဖယ်ရှားသင့်သည်။ ယခုတွင်ရှိသောပစ္စတင်၊ ဆလင်ဒါနှင့်အဆို့ရှင်စသည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုရေနံအအေးမှတဆင့်ရေပူသို့မဟုတ်ရေနွေးငွေ့များဖြတ်သန်း။ သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ တစ်လိုင်းအသာပေးသည့်စက်အတွက်သာမန်ပြောင်းလဲမှုအစိတ်အပိုင်းများကိုလျှော့ချရန်အတွက်ပံ့ပိုးမှုလမ်းကြောင်းလည်းရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်တစ်လိုင်းအအေးစက်၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။
4. စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုကိုခေတ်မီရေးအက်ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာပါ။ စက်များဖြည့်ရန်အတွက်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအတွက်လိုအပ်သောဥပဒေကြမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောစည်းမျဉ်းများသည်အဓိကဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ပစ္စတင်၊ စုပ်စက်နှင့်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်ကိုဒီဇိုင်းတွင်ထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြည့်စက်သည်“ လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း” ကိုပေါင်းစပ်လိုသောသဘောရှိသည်။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအင်အား၏ရည်မှန်းချက်မှာလိုအပ်သောကိရိယာများမပါဘဲရေပိုက်များကိုအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ လျှို့ဝှက်အရည်လမ်းကြောင်းမရှိ။
5. ဘက်စုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ။ ထုပ်ပိုးသူများအနေဖြင့်စက်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိရန်လိုအပ်သည်၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုတည်းဖြည့်သည့်အရာ / တံဆိပ်ခတ်သည့်စက်တစ်ခုသာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပုလင်းများနှင့်ထုပ်၏နောက်ဆုံးထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌, ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်ပေါ်တွင်လည်ပတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဗဟိုပုံစံမီးစက်သည်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ပုံစံ၊ အရွယ်အစား၊ ပစ္စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်တံခါးပိတ်အဆောက်အ ဦ များပါ ၀ င်သောထုပ်ပိုးမှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလက်ခံရန်အလုံအလောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။